မီးမီးခဲ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက် ယူကြုံးမရစွာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်စကားလေးတွေ ဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice - Myanmarload
မီးမီးခဲ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက် ယူကြုံးမရစွာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်စကားလေးတွေ ဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice
လွန်ခဲ့သော ၁၃ နေ့ က 14:48 October 18, 2020
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲအတွက် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအပြင် ပရိသတ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေအားလုံးက ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်နော်..။
ဒီကနေ့လေးမှာတော့ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် စကားလေးဆိုကာ ကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေလည်း မီးမီးခဲရဲ့ Fb Page ကနေ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောလာပါတယ်နော်..။
ကင်ဆာရောဂါကို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သတ္တိရှိရှိနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ မီးမီးခဲရဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ မိသားစုအပေါ်ပေးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအပြင် ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားလေးဆိုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်လည်း မီးမီးခဲရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice ပြောပြထားတဲ့ စကားလေးတွေကိုလည်း အောက်မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
"Our family is deeply saddened by the passing of MeeMeeKhel - an inspiring woman of strong faith, on Friday the 16th day of October 2020. We thank God for the wonderful life He has given her and the three children whom she loved so dearly. Being married to her for five years, I am blessed to have had her in my life with the love, care and joy she gave each and every day. MeeMeeKhel fought her courageous battle with breast cancer for three years to her very last breath, and we are at peace knowing she is no longer suffering on this earth. She will now receive her eternal reward with our Heavenly Father. Her loving memory will forever be with us. MeeMeeKhel’s life wasatrue testimony of God’s love and her love for God will always give me strength. We know her story and her songs will continue forever. We thank everyone who has reached out and shown their love and support to our family in this difficult time. We have been deeply touched by all your prayers for her and our families in Australia and Myanmar. We are also thankful for all her fans who have supported her throughout her music career of 20 years. I apologise to those who did not learn of this sad news from me personally and hope that you will understand how challenging it has been.
We thank you for respecting our family’s privacy as we deal with the loss of her beautiful soul.
I WILL ALWAYS FOREVER LOVE YOU EH. ."
"၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် သောကြာနေ့မှာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ MeeMeeKhel ကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့မိသားစု အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်..။ သူမနဲ့ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ကလေးသုံးယောက်ကို ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို အများကြီးကျးဇူးတင်ပါတယ်..။ သူမနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်မှာ ငါ့အတွက် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ဂရုစိုက်မှုတွေကို သူမနေ့တိုင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်..။ MeeMeeKhel ဟာ ၃နှစ်လုံးလုံး နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ရင်သားကင်ဆာကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အခုတော့ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ အေးချမ်းနေပါပြီ..။ သူမကအခုတော့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူနေပါပြီ..။ သူမကိုချစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှတ်ဉာဏ်တွေဟာ ငါတို့နဲ့အမြဲအတူရှိနေမှာပါ..။ MeeMeeKhel ရဲ့ဘဝဟာ ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့သက်သေခံချက်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ငါ့ကို အမြဲ ခွန်အားပေးပါလိမ့်မယ်..။ သူမရဲ့အကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့သီချင်းတွေဟာ အစဉ်အမြဲဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပါ..။ ငါတို့မိသားစု အရမ်းကို ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ပြသကာကူညီဖေးမတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ သူမနဲ့ မိသားစုအတွက် ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သြစတေးလျမှာရှိတဲ့လူတွေရော မြန်မာမှာရှိတဲ့ သူတွေကိုရော အရမ်းကိူ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ သူမသီချင်းဆိုလာတဲ့ အနှစ်၂၀ လုံးလုံး သူမကိုအားပေးကြတဲ့ Fan တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ဒီဝမ်းနည်းစရာသတင်းကို ငါဆီကနေ တိုက်ရိုက်မသိခဲ့ရတာတွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်..။ အဲ့ဒါဟာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။ သူမရဲ့ လှပတဲ့ဝိညာဉ်လေးဆုံးရှုံးသွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိသားစုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို လေးစားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ငါမင်းကို အမြဲတမ်းချစ်နေပါမယ် EH. ." ဆိုပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice က ရေးသားထားတာပါနော်..။
Source & Photo Credit - Mee Mee Khel's Fb Page